moi: Peaceful conditions restored in Southern Maungtaw Township
Peaceful conditions restored in Southern Maungtaw Township
On 16th November, our journalist team coveredastory about activities provided by ARG (Arakan Rakkhita Group) to locals in Kha Yay Myaing village.
On the way back, we stopped at the Monastery of Khayay Myaing village to pay homage to the monk. The Monk (Sayadaw) expressed his feelings to the locals for the need to conduct more security, to devote to religion and to be united in the village.
After that, we passed through Bawdigone and Waitharli villages where we saw the peaceful livelihoods of the locals such as harvesting, winnowing, growing seasonal crops, fishing, and students going back to schools and 3-wheel-cycles in the village.
On 12th November, while we are crossing Maungtaw-Kyein Chaung road, we heardaclash far away. The incident was violent attackers onacar on the road. On the 13th, that incident was reported in the newspapers. And we learnt that area clearance operations were being conducted the next day.
On the 13th, our team witnessed the peaceful condition of villages along the road in southern Maungtaw, even it wasn’t back to the previous condition yet.
When we arrived in Maungtaw on the 10th November, we found that the town was booming with the opening of markets, stalls, restaurants and tea shops.
On the full moon day of Tazaungmone which falls on the 14th, monasteries and religious buildings were teeming with the Buddhist devotes who were donating Kathina robes.
On the 16th, while covering news around town, we found that Maungtaw Myoma Market was peaceful and crowded with buyers and sellers as well as in the Ward-2 Market.
In the markets, we could see that some local villagers were selling local products and they went back to their villages to get their necessary things.
Moreover, public and private banks were open and we would like to inform you all Maungtaw and its environs are now peaceful and now back to normal.
မောင်တောမြို့ပေါ်နှင့် မောင်တောတောင်ပိုင်းတွင် တည်ငြိမ်အေးချမ်း လျက်ရှိသည်ကို တွေ့မြင်ရ
မောင်တော နိုဝင်ဘာ ၁၆
မိမိတို့ သတင်းအဖွဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်တွင် မောင်တော - အလယ်သံကျော် ကွန်ကရစ်လမ်းမကြီးအတိုင်း ခရေမြိုင်ရွာဘက်သို့ သွားရောက်၍ ရခိုင်လူမှုစီးပွားတိုး တက်ရေးအဖွဲ့ (ARG) က နယ်မြေအတွင်း ကူညီ ထောက်ပံ့မှုများ ပြုလုပ်နေသည့် သတင်းကို သွားယူခဲ့သည်။
အပြန်တွင် ခရေမြိုင်ရွာထဲသို့ ၀င်ရောက်ပြီး ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း ဆရာတော်ထံ ၀င်ရောက် ဖူးမြော်ခဲ့သည်။ ဆရာတော်က တိုင်းရင်းသားကျေးရွာများ၏ လုံခြုံရေးပိုမိုဆောင်ရွက်ပေးစေလိုမှု၊ ကျေးရွာ နေပြည်သူများ ဘာသာ၊ သာသနာကို ပိုမို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်စေလိုမှုနှင့် ပိုမို စည်းစည်းလုံးလုံး ညီညီ ညွတ်ညွတ်ဖြင့် ရှိစေလိုမှု စသည့် စေတနာ စကားများကို မိန့်ကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဗောဓိကုန်း၊ ဝေသာလီ စသည့်ကျေးရွာများကို ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရာ စပါးရိတ်သိမ်းနေသူများ၊ ချွေလှေ့နေသူများ၊ ရာသီသီးနှံစိုက်ပျိုးနေသူများ၊ ငါးရှာသူများ၊ ကျောင်းဆင်းလာသော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ၊ အငှားယာဉ် သုံးဘီးဆိုင် ကယ်များဖြင့် သွားလာနေသူများ စသည်ဖြင့် အေးချမ်းနေသော နယ်မြေအခြေအနေကို မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ မောင်တောမြောက်ပိုင်းဖြစ်သည့် မောင်တော - ကြိမ်ချောင်းလမ်းဘက်ဖြတ်သန်းစဉ် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုနှင့် လမ်းတွင် ကားကို မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်ခံရမှုသတင်းကို ကြားသိရပြီး ထိခိုက်မှုများလည်း ရှိသည်ကို သိခဲ့ရသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက် ညပိုင်းနှင့် ၁၃ ရက်နေ့ သတင်းစာများတွင်လည်း အဆိုပါ တိုက်ပွဲသတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိခဲ့ရပြီး ဖြစ်သည်။ နောက်နေ့တွင်လည်း နယ်မြေ ဆက်လက်ရှင်းလင်းရေး ဆောင်ရွက်နေသည့်သတင်းများကို ကြားရသည်။
မိမိတို့ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့က မောင်တောတောင်ပိုင်းဒေသဖြစ်သည့် ကံပူး၊ အလယ်သံကျော်၊ မောရ၀တီ၊ ဥဒေါင်း၊ ကိုင်းကြီး၊ ဒုချီးရားတန်း၊ ရွှေဗဟိုရ် စသည့် ကျေးရွာများကို ကားလမ်းမကြီးအတိုင်း ဖြတ်သန်း ကြည့်ရှုခဲ့စဉ် နဂိုအခြေအနေအတိုင်း မဟုတ်သေးသည့်တိုင် နယ်မြေအခြေအနေ အေးချမ်းပြီး တည်တည် ငြိမ်ငြိမ်ရှိနေသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ မောင်တောမြို့သို့ မိမိတို့ ရောက်ကတည်းက မြို့ပေါ် တွင် ဈေးဆိုင် အများစု ဖွင့်လှစ်ထားခြင်း၊ ထမင်းဆိုင်များ၊ လက်ဖက်ရည် ဆိုင်များ တွင်လည်း လူများစုစုဝေးဝေးဖြင့် အေးအေးချမ်းချမ်း ရှိနေခြင်းတို့ကို တွေ့မြင်ရပြီး နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက် တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ကလည်း မြို့ပေါ် ဘုန်းကြီး ကျောင်းများနှင့် သာသနာ့ဗိမာန်တို့တွင် ကထိန်သင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းများ၊ အလှူအတန်းများ စည်စည် ကားကား ပြုလုပ်နိုင်ကြသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် မောင်တောမြို့အတွင်း လှည့်လည်သတင်းယူစဉ် မောင်တောမြို့မဈေး၌ စိန်ရွှေ ရတနာဆိုင်များ၊ အထည်ဆိုင်များ၊ ကုန်မာဆိုင်များ၊ စားသောက်ကုန်ဆိုင်များ၊ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်များ၊ စတိုးဆိုင်များ၊ ရေလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များ၊ နာရီနှင့် မျက်မှန်ဆိုင်၊ ခရီးဆောင်အိတ် အမျိုးမျိုး အရောင်းဆိုင် စသည်တို့၌ ရောင်းဝယ်နေသူများဖြင့် အေးအေးချမ်းချမ်း ရှိနေသည်ကို တွေ့ရသကဲ့သို့ ရပ်ကွက် (၂) ဈေးတွင်လည်း ဈေးရောင်းဈေးဝယ် များဖြင့် စည်ကား လျက်ရှိသည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
မောင်တောမြို့ဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာများမှလည်း ၎င်းတို့ကျေးရွာမှထွက်ရှိသည့် သီးနှံများ လာရောက်ရောင်းချခြင်း၊ လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများ ပြန်လည်ဝယ်ယူခြင်း စသည်တို့ကိုလည်း တွေ့မြင်ရသည်။
ထို့ပြင် မောင်တောမြို့ရှိ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်၊ ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ် စသည့်ဘဏ်ခွဲများလည်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားသည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ ရပါကြောင်း မောင်တောမြို့ပေါ်နှင့် အနီးတစ်ဝိုက် အေးချမ်း တည်ငြိမ်နေမှု အခြေအနေ ကို ရေးသားတင်ပြ လိုက်ရပါသည်။
သတင်း - ကိုသက်နှင့် အဖွဲ့၊ ဓာတ်ပုံ - ဖိုးထောင်နှင့် မင်းထက်